Kuhlomuliswe imiphakathi emaphandleni | News24
LAST UPDATED: 2018-01-23, 11:00
Kuhlomuliswe imiphakathi emaphandleni
PHOTO: supplied Emcimbini waseMzumbe (kusuka kwesokunxele) Maxwell Mhlongo weSouth Coast Tourism, Zanele Nkosi weTime Travel, Sthembiso Chiliza womkhandlu kanye nekhansela lika ward 15 uLondolo Zungu.
ISOUTH Coast Tourism okungumnyango wezokuvakasha kanye nokungcebeleka ihlomulise abantu basendaweni yase Mzumbe kuWard 15 nasezindaweni ezakhelene nalesisigceme.
Ihholo lakwaNomakhanzana beligcwele kungekho ngisho indawo yokufaka unyawo ngoLwesihlanu ngesikhathi abalomnyango behambele lendawo ukuyonika umphakathi ulwazi ngezokuvakasha ezindaweni zase makhaya.
Ikhansela lendawo uLondolo Zungu udlulise amazwi ngomsebenzi omuhle owenziwa yilomnyango kusukela ngeminyaka ka1994 wokuthuthukisa imiphakathi kulezindawo. UZungu uthe lemiphakathi isiyahlomula kulokhu okwakuqalwe umnyango wezokuvakasha njengoba abahlali sebekwazi ukuthola amasenti ngamisebenzi eqalwa yilomnyango.
Okhulumela umkhandlu usekela meya uSthembiso Chiliza uthe ozothanda ukubona ubudlelwane obusha obuningi phakathi kwemiphakathi kanye nalomnyango. UChiliza ugquqguzele kakhulu intsha ukuba iqale amabhizinisi ayo ukuze nayo ithole usizo kulomnyango nayo ihlomule.
Esinye isihambeli zomcimbi esivela enyuvesi iDUT sithe intsha ayingene emkhakheni wezokuvakasha njengoba amathuba omsebenzi emaningi nakhona.
“Intsha mayingene kulomkhakha ifunde izifundo eziphathelene nezokuvakasha. Miningi imikhakha efana neHospitality phecelezi imisebenzi ephathelene nokuvakasha, ukusebenza emahhotela, ukupheka nokunye okuningi okukhona kulomkhakha.”
Abe tourism bathe kubathokozisile ukubona abafundi bezikole zendawo behambele lomcimbi ngesikhathi samaholidi. Abafundi baseDingimbiza, Nomakhanzane kanye nabaseZibonele bephume ngobuningi babo bezothola ulwazi.
Okhulumela iSouth Coast Tourism uMaxwell Mhlongo uchazele umphakathi ngeSunny and Safe Campaign yabo ebandakanya ukuhloniphana emphakathini, ukuhlonipha izivakashi emabhishi kanye nemithetho yasebhishi.
Uthe wonke umuntu kumele aziqhenye ngendawo yase South Coast ngoba njengabahlali bakhona yithina abaphathi bayo okumele siyikhankasele futhisiqinisekise ukuthi izivakashi ezifikayo ziyithola isesimweni